Amaloota too'annaa warra qaaqatti dabalte qindeessuu nidandeessa. Fakkeenyaaf, qabduu isa dabalteef, halluu, maqaa, fi hamamtaa jijjiiruu nidandeessa. Yammuu qaaqa tokko uumtuu ykn gulaaltuu, amaloota too'annaa baayee jijjiiruu nidandeessa. Haa tahu malee, yeroo ka'iinsaa amaloota muraasaaf qofa jijjiiruu dandeessa.
haala saxaxaa keessatti amaloota too'annaa jijjiiruuf, too'annoocha irra mirga-cuqaasi, kana booda Amaloota filadhu.
Title is: Amaloota too'annoota Qaaqa Gulaalaa keessaa jijjiiruu